ရိုး ရိုး ဘ လော့ဂ် : Ginger Boy
Posted by ရိုးရိုး at Wednesday, February 15, 2012
ဒန့် ဒလွန်သီး 15 February 2012 at 11:44
ကြောင်ကြီးတွေက ၀၀ ကြီးတွေနော်။
ငါတော့ အိမ်ကဘိုမကိုတောင် သနားလာတယ်။
ငါအိမ်ပြန်တုန်းက ငါ့အိပ်ယာပေါ်တက်တာကိုမကြိုက်လို့ 
ဘိုမ နောက်ငါ့အိပ်ယာပေါ် ဘယ်တော့မှမတက်နဲ့ ကြားလားလို့ 
...အလင်းစက်များ 15 February 2012 at 11:48
မိုက်တီးတွေပါလားဟ ရုပ်တွေက ဖိုက်တာ ရုပ်တွေနဲ့။ လူဇိုးတွေ။ ခုတလော လမ်းမှာ တွေ့ သမျှ ကြောင်တွေ လိုက်လိုက် နှုတ်ဆက်နေလို့မနည်းရှောင်နေရတယ်။ စွန်ချက်က အဲ့လို
ပျိုးယုဝသုန် 18 February 2012 at 12:21
အ၀ါလေးက အိမ်က၀ိုင်းလုံးနဲ့တောင်ဆင်သေးတယ်..၀ိုင်းလုံးလည်ချက်ကတော့အစာမထည့်မိရင်အစာဗူးကိုတွန်းလှဲပြီးစားတတ်တယ်လေ..ပြန်တော့မထောင်တတ်ဘူး.. ဓါတ်ပုံရိုက်ရင်မကြိုက်ပဲထွက်ပြေးတတ်လို့ သူ့ကိုစချင်ရင်ဓါတ်ပုံလိုက်ရိုက်တာပဲ ..
ရိုးရိုး 8 May 2012 at 11:50
ဒန့် ဒန့်ဒီကကြောင်တွေ က မဆော့ဘူး။ မြန်မာပြည်က ကြောင်လေးတွေက ပါးပါးလျှလျှ နဲ့ ချစ်စရာပိုကောင်းတယ်။ Burmese cats are very trainable, smart and very adorable. Mg Kyar: wasalovely cat. He was likeaBurmese cat. Can't see hime anymore.
အလင်းစက်များ lသူတို့ က ဘုတ်အီးတွေဟ။ မဖိုက်နိုင်ပါဘူးဟာ။ cats love you , they might know who really care.
ပျိုးယုဝသုန် ကြောင်နာမည်ဝိုင်းလုံးတဲ့လား။ ကြောင်ပို့ စ် တော့ စိတ်ဝင်စားတယ်။ ကြည့်ချင်တယ်။ မြန်မြန်ရေးလေ။
Mary Grace 10 July 2012 at 14:18